Recipe Pumpkin Prawkin Spaghetti - Hagaaji Caafimaadkaaga - TELES RELAY
ACCUEIL » rasiidhada »Recipe Pumpkin Prawkin Spaghetti Recipe - Hagaaji Caafimaadkaaga
Recipe Pumpkin Spaghetti delicious - Kordhin Caafimaadkaaga
Dadku badanaa waxay leeyihiin xiiso gaar ah oo baastada iyo diyaarintooda kala duwan. Waa saxan ay leeyihiin kuwa raacsan adduunka oo dhan. Si kastaba ha noqotee, cuntooyinka sida bocorka bocorka, oo ah khudrad hodan ah, ayaa badanaa loo arkaa wax aan caadi ahayn ama aan caadi ahayn.
Waxaan rabnaa inaan bedelno aragtidan qaldan ee ah waxa qudaarta kugu siin kara saxamada qaarkood. Taasi waa sababta Waxaan ku tusin sida loo diyaariyo karinayo bocor bocor leh. Natiijadu waa mid cajiib ah!
Intaa waxaa dheer, haddii aad ka mid tahay dadkaas, inkasta oo dadaalkooda oo dhan, uusan sameyn karin baastada la'aan, waa beddelaad caafimaad leh. Isku dar carbohydrates iyo fiitamiinada baastada oo leh faa'iidooyinka gaarka ah ee bocorka!
Si looga dhigo diyaarintaan mid aad u dabacsan, waxaan kuusoo bandhigeynaa cuntada ugu caansan ee caan ah, laakiin sidoo kale mid kale, taas oo kaa dhigeysa inaad rabto inaad diyaariso. Fikradda ayaa ah in had iyo jeer la keeno noocyo kala duwan suxuunta ugu macaan.
Cuntada qadiimka ah ee bocorka bocorka
Bocorka guud ahaan waxaa loo adeegsadaa diyaarinta kareemada ama qooraansaneynaa u adeegay bilow ahaan, ama xitaa baradho la shiiday. Waxa kale oo aad samayn kartaa suugo si aad u raacdo ama xilli xilli cunto aad isugu xigta. Tani waa bar tilmaameed u adeegi doonta sidii fikrad kaa siinaysa fikrad kaa siinaysa jihada aan u qaadan karno kariskaan.
Cuntadani caadiga ah ee diyaarintaan, waxaad isticmaali doontaa bocorka sida qurxisaan for spaghetti. Waxa xiisaha lihi waa isku darka dhadhanka iyo habka ay maaddooyinka isugu qasmaan hab macaan.
1 basal weyn
Koobabyada 3 ee bocorka diiray (600 g)
Koobka 1 ee kareemka dareeraha ah (250 ml)
2 miisaska saliidda sayniska (30 ml)
Qaadooyinka xNUMX ee nutmeg (2 g)
1 miisaankeedu cusbo (15 g)
1 qaado miro basbaaska madow (15 g)
Koobabka 2 ee parmesan (ikhtiyaari ah) (200 g)
Sidoo kale akhri qodobkan: Cuntooyinka cuntada ee loo yaqaan '6' oo ka caawin doona ilmahaagu inuu cuno khudradda
Ku shub digsi saliid saytuun ah digsiga, ka dibna ku dar cut basasha galay julienne ama xaleef iyo bunni kuleylka dhexdhexaadka ah cusbo yar.
Ka dib ku dar bocorka diiray oo la jarjaray digsiga leh basasha. Karsado ilaa la jilciyo.
Waqti ka waqti, waxaa lagama maarmaan noqon doonta in waxoogaa la kareemo si loo helo isku-dhafan badan iyo isku-dhafan.
Dhanka kale, kudarso weelka digsi biyo, saliid iyo cusbo iskuna kari.
Ugu dambeyntii, ku dar kareem digsiga oo ku kari farmaajo yar.
Markuu spaghetti diyaar yahay, ku dar maaddooyinka kale ka dibna kari daqiiqado kale oo ah 2.
Bocor iyo tufaax likaha boqoshaada
Kala duwanaanshahaan cuntooyinka asliga ah wuxuu ka dhigayaa mid aad u fudud oo sahlan in la gaaro marka loo eego kan hore. Waxaa sii dheer, haddii aad haysatid waqti yar, waxaad ku dari kartaa wax yar basiilka iyo xawaashka digaagga. Si kastaba ha ahaatee, hadaad u diyaarinayso bocor iyo boqoshaada, waxaad heli doontaa cunno aad u wanaagsan oo nafaqo badan.
Xirmooyinka digaagga 3
Koobabka 2 ee bocorka (400 g)
½ koob oo ah likaha (100 g)
2 Broccoli Laamaha
2 oo toon ah, toon la'aan
2 miisaanno dheeraad ah oo saliid saytuun ah oo bikrad ah (30 ml)
Koob khamri cad ah (62 ml)
Sidoo kale soo hel cuntooyinkaan: Cuntada ugu wanaagsan bocorka 3 ee casho
Steam bocorka iyo broccoli.
Ka dib, skillet, ku shiil basasha julienne ee toon ah toon.
Ku dar boqoshaada, marka basasha ay noqoto mid hufan. Kari wax kasta daqiiqadda 1. Ha ilaawin inaad cusbo ku darto.
Isla mar ahaantaana, ku dul saar xareeyaha digaagga kuleyl weyn oo shiil. Ka dib u kala googoo oo ku dar digsiga.
Isla sidaas ku samee bocor iyo broccoli, oo horey loo googooyay.
Ugu dambeyntii, ku dar khamri yar oo cad cad digsiga oo ay ku jiraan dhammaan waxyaabaha ka kooban oo isku dar daqiiqadaha 2. Tani waxay siin doontaa taabasho gaar ah oo dhadhan saxankaaga.
Ka dib ka qaad dabka, ha qaboobo oo ha ku raaxeysto.
Labadan nooc ee kariska cuntada ee bocorka bocorka, waxaad qoyskaaga siin doontaa saxan hodan ku ah nafaqada iyo qaasatan kuwa kala duwan oo macaan badan, markaa ha ka shakin inaad tijaabiso!
4 siyaabo kala duwan oo loogu diyaariyo baastada macaan
Waxaan ku soo bandhignay maqaalkan 4 maanta qaabab kala duwan oo loo diyaariyo baastada si aad ugu raaxeysan karto suxuunta macaan. Read more »
Maqaalkani wuxuu u muuqday midka hore https://amelioretasante.com/delicieuse-recette-de-spaghettis-au-potiron/
Recipe for rooti jilicsan oo macaan - Caafimaadkaaga hagaaji